IMISESANE YOKUZIBANDAKANYA EMNYAMA YEDAYIMANI EYI-25 EYINDLELA EQHELEKILEYO YOKUHAMBA - UTHETHATHETHWANO
Eyona Uthethathethwano Imisesane yokuzibandakanya eyiDayimani emnyama engama-25
Aba bengezeli abamnyama abaqaqambileyo bazisa umdlalo weqonga. Ngokunyanisekileyo kweCatbirdNYC.com
Ukuhlaziywa ngoMatshi 24, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ukubonakaliswa kobuhle kunye nazo zonke izinto ze-chic, umnyama ngokuqinisekileyo ngowona mbala uthandwayo kwifashoni. Ayimangalisi into yokuba amakhonkco okuzibandakanya edayimane emnyama avele njengenye yeendlela ezishushu zomtshato phakathi kwamantombazana 'kuyo' kwiminyaka yakutshanje. I-Bold, intle kwaye intle ngokufihlakeleyo, ezi ngwevu zimnyama kwiinguqulelo zedayimane yendalo lukhetho oluhle kumtshakazi ukukhangela iringi yokuzibandakanya eyahlukileyo . Emva kwayo yonke loo nto, uMnu.Big omkhulu uphakamise ukuba enze isimboli somfanekiso uCarrie Bradshaw onedayimane emnyama enekalati ezintlanu Itay Malkin iseti ebekwe kwigolide emhlophe eyi-karat eyi-18 (ukuba sichaziwe) kwimuvi ka-2010 Ukwabelana ngesondo kunye neSixeko 2 , Ukubeka la matye anqabileyo kwindawo eyodwa.
Imeko yabo ethandwayo ecaleni, iidayimani ezimnyama lukhetho lobulumko ukuba yi-weds kuhlahlo-lwabiwo mali , njengoko zihlala zibiza ngaphantsi kweedayimane ezimhlophe zesintu. Enye into yokudibanisa? Ziyamangalisa ngeendlela ezahlukeneyo. Nokuba ujikelezwe yi-halo yedayimane encinci emhlophe, ilitye elikhazimlayo lendawo yokubeka iringi yesolitaire okanye ilitye eligqibeleleyo lokuqaqamba kumtshato womtshato, kukho isitayile esimnyama sedayimani yomntu wonke.
Ithetha ntoni iRingi yeDiamond yokuzibandakanya?
Sisekele amakhonkco edayimane emnyama ayafana isimbo sokubulala , kodwa ukubaluleka kwabo kunzulu kakhulu kwaye banovelwano ngakumbi kunesibheno sentombazana epholileyo. Ukutyhubela iinkulungwane, iidayimani zibonakalise uthando olungenasiphako, oluhlala luhleli kwaye olungaguquguqukiyo, lubenza ilitye elithandwayo lokubandakanya amakhonkco ngezizathu ezicacileyo. Ngenxa yokuba iidayimani ezimnyama ikwaidayimani zokwenyani, zonke ezi mpawu zothando lweedayimane ezimhlophe zinokusetyenziswa nakwiidayimani ezimnyama. Kwaye, ngenxa yobunzulu, umbala obenza bahluke kwiidayimane ezimhlophe, iidayimani ezimnyama zikwanxulunyaniswa nothando olunamandla kunye namandla.
Ngaba idayimani emnyama yidayimani yokwenene?
Ngelixa zinokungabinabo ubuqaqawuli obufanayo (funda: ngaphandle kolawulo ziyaqaqamba) njengeadayimane ezimhlophe ngenxa yombala wazo omnyama, iidayimani ezimnyama ziidayimani zokwenyani. Uninzi lweedayimani ezimnyama zendalo zifumana umbala wazo kwizixa ezikhulu ze-inclusions ezimnyama ezinemibala emnyama (ekwabizwa ngokuba ziziphene zangaphakathi) ezenziwe ngegraphite, pyrite okanye hematite eyenzeka njengokuba ilitye lenza kuqweqwe lomhlaba. Ezi dayimani nazo zinokuba nezaphuka ezinamabala amnyama okanye ziye zaba mnyama ekuhambeni kwexesha. Iidayimani zendalo ezimnyama zihlala zingacacanga, zinobukhazikhazi obenza ukuba zibonakale ziphantse zenziwe sisinyithi. Inyani eyonwabisayo: Uninzi lweedayimani ezimnyama ezithengiselwe ubucwebe obucocekileyo kunye neeringi zokuzibandakanya ziye zaphathwa ngonyango lobushushu / uxinzelelo oluphezulu ukongeza umbala wazo omnyama.
Eyona Ndandatho yokuDibana kweDayimani emnyama eMnyama ka-2020
Ngaba uziva iringi yedayimani yokuzibandakanya ngoku? Thenga ezinye zeentlobo zeefeksi zethu apha ngezantsi.
Isangqa samatye esintu sesithathu sifumana uhlaziyo lwala maxesha ngale ndlela intle inedayimnyama emnyama enqunqweyo kunye namatye asemacaleni amancinci asekwe kwi-14k rose yegolide.
Umtshato weCatbird I-Odile iringi ye-Swan kwi-14K yeGolide eNtsheli, $ 1,350, CatbirdNYC.com
Iingqekembe kunye nokuqaqamba kwesibhakabhaka ebusuku kuphefumlele uyilo olwahlukileyo lweringi emnyama yedayimani esetwe ngegolide etyheli, iyenza ukuba ibe likhubalo lethamsanqa.
UDana Bronfman I-constellation yebhanti yebhanti yebhondi ejikeleze i-solitaire ring kwi-18K yeGolide yeGolide, i- $ 1,935, DanaBronfman.com
Ukutshintsha iidayimani ezimnyama nezimhlophe ngegolide etyheli kunika eli qela lomtshato ukuba lihambise phambili. Nxiba wedwa okanye uyongeze kwiseti yomtshato wakho.
Ukuqokelelwa kwe-EF idayimane kunye nedayimane elimnyama ichaphaza lomsesane webhendi kwi-14K yeGolide eNtsheli, $ 1,025, EFCollection.com
Isitayile sendandatho yeklasikhi esine-twist, le mpuma ye-emerald isike i-diamond emnyama kwisimo segolide esimhlophe zombini zi-edgy kwaye aziphelelwa lixesha.
IGraziela umntwana omnyama nomhlophe umtya we-baguette band ngo-18K Dark Rhodium, $ 1,620, GrazielaGems.com
Ilitye lesiko elinqunyiwe, amatye asecaleni etriliyoni kunye nokusekwa kwegolide yegolide eyenzelwe ukuba ibonakale ibenye.
UAnna Sheffield I-Bea marquise iringi yedayimane emnyama kwi-14K Rose Gold, $ 5,600, AnnaSheffield.com
Ayifumani i-luxe ngaphezulu kwendandatho yokubandakanya i-halo enelitye elimnyama leziko ledayimane kunye ne-halo emhlophe yedayimane ebekwe kwi-18k yegolide etyheli.
UBlanca Monrós Gómez I-Aura iringi yedayimane emnyama kwi-18K yeGolide eNtsheli, $ 2,104, CatbirdNYC.com
Ukuba usemarikeni yomtshato ongalindelekanga okanye isitetimenti sokwengeza kwisitaki sakho, jonga olu khetho lwe-uber-chic ngomphetho wesitshetshe kunye ne-allover black pavé.
ULizzie Mandler I-pavé ye-edge edge band kwi-18K yeGolide eNtsundu, i- $ 2,495, LizzieMandler.com
Ngaba uziva unesibindi? Khetha i-combo edgy yedayimani leziko elimnyama kunye namatye ecaleni kweeruby ebekwe kwi-18k yegolide emhlophe.
ukuba ngekhe ubenomntu omthandayo lyrics
Ubucwebe bukaMaria Jose idayimane elimnyama kunye neringi yeringi kwi-18K yeGolide emhlophe, $ 8,000, ModaOperandi.com
Idayimani emnyama esikiweyo emnyama kunye namatye asecaleni edayimani asikeka enza 'iintolo,' le ndandatho yanamhlanje imalunga nemigca ecocekileyo kunye neenkcukacha ezingalindelekanga.
U-Anna Sheffield Ikhonkco yotolo lwe-Bea kwi-14K yeGolide emhlophe, ukusuka kwi- $ 9,275, AnnaSheffield.com
Amakhonkco amathathu egolide amnyama ayi-18k aqhagamshelwe ngeebhendi ezimiselweyo zedayimani emnyama yebhanti yenze isitaki esinye sokuma.
USpinelli Kilcollin Isangqa se-Nyx BG kwi-18K yeGolide eNtsundu, $ 5,800, SpinelliKilcollin.com
iilokhwe zomtshato ezibandakanya iindwendwe
Khetha ibhendi yomtshato otyheli wegolide enesiqingatha sedayimani emnyama kunye nesiqingatha sedayimane emhlophe umahluko opholileyo.
Ivawutsha umsesane wokufiphala kwedayimane emhlophe nomnyama ngo-18K ngegolide Emthubi, nge-1,250, Swoonery.com
Oomolokazana Boho: Le yeyakho. Ayifumani glam engenzame ngakumbi kunedayimani emnyama enqunyulwe idayimani emnyama kunye nokuseta kwegolide etyheli eneenkcukacha ze-chevron.
I-Digby kunye neIona Iringi yeRaziel kwi-14K yeGolide eNtsheli, $ 3,180, DigbyandIona.com
Ukuba izitayile zebhendi yomtshato yesiko ayisiyonto yakho, zama ibhendi enezinto ezinamaidayimani amnyama asikiweyo asethwe kwigolide yegolide.
USethi Couture Isangqa esimnyama sedayimane esikwe nge-18K Rose Gold, $ 1,100, BrokenEnglishJew jewelry.com
Olu luhle luthathe i-toi et moi ring ebonisa i-emerald esikiweyo yedayimani emnyama kunye ne-emerald esikiweyo emhlophe.
Ubucwebe beKatkim Umama + u-Emerald umsesane omnyama nomhlophe wedayimane kwi-18K yeGolide eNtsheli, $ 4,770, KatkimFineJew jewelry.com
Idayimani emnyama esikiweyo emnyama ejikelezwe yidayim emhlophe emile okwe dayimani inika le ndandatho ukuziva kubugcisa.
IGreenwich St. Jewelers Umsesane weBarclay ring ngo-18K Rose Gold, $ 3,200, GreenwichJewelers.com
Ukubiza bonke abangahambelaniyo: Idayimane emnyama esolita kwindandatho edibeneyo enamaqela amabini e-18k yenyuka igolide lelinye iphupha lomtshakazi.
USpinelli Kilcollin Isandi sikaPetra Rose kwi-18K Rose Gold, $ 7,800, SpinelliKilcollin.com
izimvo zabucala zocingo lwabucala
Le combo eclectic yelitye elimnyama elime embindini ilitye ledayimani kunye nelitye le-oval cabochon turquoise ngamatye asecaleni aqiniseke ukukuhlula kwisihlwele.
Todd Reed Umsesane we-TRDR50016 kwi-18K yeGolide eNtsheli, $ 8,450, IINKCUKACHA.com
Yintoni engcono kunedayimani enye emnyama? Sibhozo. Esi siqhushumbisi siqengqelekayo ngamatye asixhenxe ajikeleziweyo, amatye amnyama edayimani amnyama aqokelelweyo ajikeleze ilitye lesiko ledayimani elimnyama.
Isindululo I-Luna ring ring cluster ring kunye neadayimane emnyama kwi-18K yeGolide yeGolide, i- $ 3,500, Mociun.com
Nyusa into epholileyo kuseto lokudlula kwiklasikhi kwaye ukhethe isitayile ngeadayimane emnyama namhlophe.
Effy Umsesane wedayimane omnyama nomhlophe ngegolide eyi-14K emhlophe, Buza iiNkcukacha, EbuyIiJewelry.com
I-bar-set baguette iidayimani ezimnyama emagxeni eseto zinika le nto indandatho yendabuko uhlaziyo lwangoku.
Umhlaba oqaqambileyo I-trillion trellis iringi emnyama yedayimane, Buza iiNkcukacha, BrilliantEarth.com
Amatye asecaleni etringe yedayimane amnyama abeke ilitye leziko eliqaqambileyo elingwevu ledayimani.
utshata njani nj
R ebecca Overmann Itotem iringi yokubandakanya idayimane kwi-14K yeGolide eNtsheli, $ 6,250, GreenwichJewelers.com
Iifesitistas, qaphela: Le ring ibaluleke kakhulu enedayimani emnyama eguqulwe kwisimo segolide esimnyama iphambili njengoko ifika.
UEva Fehren Isangqa esisodwa seRouleau, i $ 3,325, EvaFehren.com
Le dayimani emnyama emile okwepereyitha inika ipesika yegolide engapheliyo lixabiso elifanelekileyo lomda.
UReinstein uRoss Iringi yeRibhoni emnyama yeTeyidi, i $ 3900, ReinsteinRoss.com
Yenzelwe umtshakazi ongoyikiyo ukufumana i-über-glam, eli litye lembombo ledayimani elimnyama kunye ne-luxe yedayimane ngokuqinisekileyo baya kujika.
UKimberly McDonald iringi emnyama yedayimane ene-halo yedayimane, Buza iiNkcukacha, KimberlyMcDonald.com
Ukukhudlwana akusoloko kubhetele. Isangqa esimnyama esimnyama esimnyama sidayimani sisapakisha ingqindi entle kakhulu.
UEva Fehren Isangqa seSolitaire, i-1,425 yeedola, EvaFehren.com
imihombiso yendlela yemitshato yecawe
unxiba njani ijacketsuit emtshatweni
uhamba njani ngomhla
Iiflorida zitshixo zonke iiholide zekrisimesi